Micheal Rubin oo soo Bandhigay 10 Su’aalood oo Xujo ku ah Soomaaliya, Somalilandna ku Majeertay Horumarka ay ka Sameysay Dawladnimada |
Micheal Rubin oo soo Bandhigay 10 Su’aalood oo Xujo ku ah Soomaaliya, Somalilandna ku Majeertay Horumarka ay ka Sameysay Dawladnimada
Aqoonyahan Micheal Rubin oo ah Khabiir Maraykan ah oo falanqeeya Siyaasadda iyo Millatariga ayaa soo bandhigay 10 Su’aalood oo ay lagama maarmaan tahay inuu si waafiya uga jawaabo Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo Maraykanka socdaal ku jooga, haddii uu doonayo inay sii socoto kaalmada Maraykanka iyo Caalamku siiyaan Soomaaliya.
Micheal Rubin wuxuu warbaahinta Maraykanka ku soo bandhigay qormo xiiso leh oo uu ku durayo siyaasadda dawladda Muqdisho, kuwaasi oo weji gabax ku ah Ra’iisul-wasaare Khayre iyo safarkiisa Maraykanka. Mr. Rubin wuxuu xusay in Ra’iisul-wasaare Khayre si maangal ah ugu jawaabo 10 su’aalood oo ay tahay in shardi looga dhigo mucaawimada la siiyo Soomaaliya. Waxa kaloo su’aalahaasi ku jira qaar uu Somaliland ku majeertay horumarkeeda iyo dawladnimadeedaba.
Tobankaas su’aalood ee Khabiirku ku xujeeyey dawladda itaalka daran ee Soomaaliya waxa soo turjumay Cumar Maxamed Faarax, waxaanay u qornaayeen sidan:-
1. Waa maxay Sababta Soomaaliya ay u hesho kaalmada badan ee caalamka? Maraynkanku wuxuu kordhiyey qaadhaankii uu siin jiray Soomaliya oo uu gaadhsiiyey $900 oo Milyan oo Doolar, kadib markii uu muddo siinayey 500 oo Milyan oo Doolar. Waxa kaloo ay Soomaaliya ka heshaa beesha caalamka dhaqaale xad dhaaf ah,haddaba miyey jirtaa wax horumar ah oo Soomaaliya ka sameysay dhinacyada Ammaanka, dhulka ay maamusho, dhaqaalaha iyo waxbarashada? Kaas oo u dhigma xaddiga deeqaha la siiyo.
2. Maxaa Mushaharooyinka lagu qaato Muqdisho aad u sarreysiiyey? Hawlwadeennada dawladda Soomaaliya waxay qaataan Mushahar aad u sareeya, iyadoo wax ku oolnimadda adeegyada ay qabtaan aad uga hooseeyaan Somaliland oo qabta
shaqooyin wanaagsan , iyadoo wax aad u yar ay bixisa, maxay Soomaaliya u sameyn weyday sida ay yeeshay Somaliland?
3. Maxaa idiinka Qorsheysan Musuqmaasuqa? Soomaaliya waxay sagxada u hooseysa kaga jirtaa liiska dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka, siday shaacisay Transparency International. Sidee ayuu Maraykanku lacag u siiyaa dal ka musuqmaasuq badan Venezuela, Afghanistan iyo Waqooyiga Korea? Maxay Xukuumadda Soomaaliya ka qabatay xakameynta Musuqmaasuqa? Imisa Wasiir ayaad u eriday musuqmaasuq?
4. Maxaa Sababay Socdaallada badan ee Farmaajo? Farmaajo wuxuu xilka qabtay isagoo ku eedeeya Madaxweynihii ka horreeyey in
safaradiisa dibaddu badan yihiin oo inta uu Muqdisho joogaa ay ka badan tahay inta dibadda marayo. Farmaajo wuxuu dibadda si xad-dhaaf ah ugu safraa dalka dibadiisa
booqashooyin lagu tilmaamay tamashle, iyadoo dalkiisu xaalad adag ku jiro. Muxuu Madaxweyne Farmaajo uga baahan yahay inuu dibadda ugu safro? Miyaanay aheyn shaqadii Wasaaradda Arrimaha Dibadda? Marka uu Farmaajo dibadda u baxo kuma ayaa maamula hawl-maalmeedkii iyo dedaaladii dalku kaga soo kaban lahaa mashaakilka ka jira?.
5. Soomaaliya ma badbaadi kartaa AMISOM la’aanteed? AMISOM waxa loogu talogalay inay la dagaalanto oo kaliya Alshabaab, waxase la
doonayaa in Soomaaliya ay sameysato ciidammadeeda gaarka ah, laakiin waxase ciidammadu ka cowdeen inay waayeen mushaharkoodii oo aanay doonaynin inay mushahar la’aan ku dagaalamaan. Yaad u soo dacweyseen mushaharka ciidammada ee la
leexsaday? Miyaad filaysaa in Soomaaliya iska caabido Alshabaab haddii aanay ciidammadu doonaynin inay dagaalamaan?
6. Haddii aad doonaysaan Taageerada Maraykanka maxaad dalkiina uga kirayseen China?
Waxaad joogtaa Washington oo aad ka dalbanayso in la idiin kordhiyo kaalmada, laakiin Xukuumaddaadu waxay China ka kiraysay badda Soomaaliya, Ma waxaad rumaysan tahay in China uu u gacan furan yahay Soomaaliya? Haddii aanay arrintu sidaas aheyn waa maxay danaha aad ka leedihiin China?
7. Sababtee ayaad uga codsateen Maxkamadda caalamiga ahi inay u garnaqdo khilaafka Kenya u dhexeeya oo aad haddana u sugi la’dihiin go’aankeeda? Dawladda Soomaaliya waxay ka dalbatay Maxkamadda caalamiga ah ee Adduunka inay ka garnaqdo
khilaafka badda ee u dhexeeya Kenya, haddana waxaad si qarsoodi ah u xaraashteen saliida ku jirta goobaha lagu muransan yahay miyaanay taasi wax u dhimaynin sharcinimadii dacwaddii aad geyseen oo aad haddana iska indho-tiraysaan?
8. Ma waxaad aaminsan tihiin in Turkigu xoog ku nabadeynayo Soomaaliya? Turkigu wuxuu si xoogle u maalgeliyey Soomaaliya, waxaanad u adeegsanaysaan inuu dhexdhexaadiyo khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kalena Turkigu wuxuu ka dhistay Soomaaliya saldhig Millatari oo uu ku leeyahay Muqdisho, waxa kaloo uu Soomaaliya ku tabobaraa kooxaha xagjirka ah ee ku sugan Soomaaliya, sidaas darteed Turkigu miyuu nabadeynayaa Soomaaliya?
9. Ujeeddo noocee ah ayaad ka leedihiin dib ula midowga aad doonaysaan inaad la gashaan Somaliland? Somaliland waxay ahayd Qaran madax-bannaan tan iyo 1991kii oo Soomaaliya uu ka taagnaa jiho-wareer. Maxaad ka filaysaa Somaliland oo muddadii u dhexaysay 1988- 1991kii ay dawladdii Muqdisho u geysatay xasuuq qorsheysan, iyadoo Somaliland sheegtay in aanay abid dib ula midoobaynin Soomaaliya? Siddee ayey Xildhibaannada ku jira Baalamaanka Soomaaliya u metali karaan Somaliland oo aan laga soo dooran isla markaana aanay tagi karin? Miyaanay macquul ahayn haddii Somaliland tidhaahdo Soomaaliya lama hadlayno inta ay furdaaminayaan arrimahooda ee ay wax ka qabanayaan musuqmaasuqa isla markaana nabad laga hirgelinayo? Haddii ay Xukuumadda Soomaaliya sheeganayso inay iyadu sharci tahay, maxaad deeqaha la idin siiyo Boqolkiiba Soddon uga siin weydiin Somaliland?
10. Su’aasha tobnaad waxay la xidhiidhay Soomaaliya oo eriday sarkaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la yidhaahdo Cabdilaahi Dool oo shaqada laga saaray markii uu sheegay in aanay Soomaaliya dani ugu jirin inay colaada Israa’iil.